သိကောင်းစရာများ - - Tele relay မှတစ်ဦးစာရွက်စာတမ်း scan
မူလစာမျက်နှာ » အကြံပြုချက်များ "မှတစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းစကင်ဖတ် - သိကောင်းစရာများ
သိကောင်းစရာများ - နေစာရွက်စာတမ်း scan
သင်သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းနှင့်အတူစက္ကူစာရွက်စာတမ်းစကင်ဖတ်စစ်ဆေးချင်တဲ့အခါ, သငျသညျရိုးရိုး, ပုံယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကိုများအတွက်, သငျသညျရုံးမှန်ဘီလူးကဲ့သို့ application ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါဟာသင်သှေးသင့်ရဲ့စက္ကူစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်သင့်စမတ်ဖုန်းကိုအသုံးပြုထားတယ်။
သင်အလိုရှိသည့်အခါအဆိုပါစမတ်ဖုန်းကင်မရာအလွန်အသုံးဝင်သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်မိတ္တူစောင့်ရှောက် တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်း။ ဤနည်းလမ်းကိုအစာရှောင်ခြင်း, လွယ်ကူသည်နှင့်မကြာခဏအလုံအလောက်ပြုလုပ် troubleshoot ။ သို့သော်သင်သည်သင်၏စာရွက်စာတမ်းနှင့်သှေးစကင်ဖတ်စစ်ဆေးချင်တယ်ဆိုရင် အကျိုးကျေးဇူး options များ scan ဖတ်ရသောအခါ, ဒီနေရာမှာဘယ်လိုပါပဲ။
သင့်ရဲ့ smartphone ကိုရုံးမှန်ဘီလူးပေါ်လျှောက်လွှာ Install
အဆိုပါလျှောက်လွှာ Office ကိုမှန်ဘီလူး Microsoft ကတီထွင် (Windows Store မှာရရှိနိုင်download link ကို), သင့်ရဲ့ PC မှာအသုံးပြုမှုသည်။ ဒါပေမဲ့ဒီမှာကမိုဘိုင်း version ကိုသင်စမတ်ဖုန်းကနေသင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းများ scan ကူညီပေးပါမည်ဖြစ်ပါသည်:
- အဘို့ အန်းဒရွိုက်အဆိုပါအခမဲ့လျှောက်လွှာကို Download လုပ်ပါ Microsoft က Office ကိုမှန်ဘီလူး - PDF ကို Scanner Play Store ကိုအပေါ်;
- သင့်ရဲ့ iPhone အဘို့, ကို download လုပ်ပါ iOS အတွက် de Microsoft က Office ကိုမှန်ဘီလူး - PDF ကို Scanner App Store မှာ။
installed ပြီးတာနဲ့မှန်ဘီလူးရုံးသင့်ရဲ့ smartphone ကနေမာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုချက်တောင်း။ အဆိုပါ application ကိုလည်းဓါတ်ပုံတွေကို ယူ. ကယ်ဖို့ခွင့်ပြုချက်အဘို့အသင်မေးပါလိမ့်မယ်။ "Allow" ကိုနှိပ်ပါ အခါတိုင်း။
အဆိုပါ Microsoft က application ကိုတစ်ဦးကဲ့သို့ဖြစ်၏ လက်ကိုင် Scanner။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်တစ်ဦး desktop ကိုစကင်နာ features တွေ၏တိုးတက်မှုကိုရှာဖွေမည်မဟုတ်ပေမယ့်ရလဒ်အများဆုံးကိစ္စများတွင်တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုစတင်ပွင့်လင်းရုံးမှန်ဘီလူးနှင့်နှိပ်ပါ "Start ကိုစကင်"။ ရှေးခယျြ စာရွက်စာတမ်းအမျိုးအစား စံစက္ကူစာရွက်စာတမ်းများ, စီးပွားရေးကဒ်, Whiteboard သို့မဟုတ်ရုပ်ပုံ: သင်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးချင်တယ်။ ရုံ ဘောင်စာရွက်စာတမ်း သငျသညျ၏အလယ်၌ scan နှင့်နေရာချင်တယ် လိမ္မော်ရောင်ဘောင် ကြောင်းရုံးမှန်ဘီလူးကျော်ပုံပေါ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ရုပ်ပုံကို ယူ. , ကဲဒါဆိုရင်တော့သင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်း scan ဖတ်နေပါသည်! ယင်းထောင့်အကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်မနေပါနဲ့: အ application ဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါဖြေရှင်းပေးရန်နိုင် အလိုအလျှောက်, သင်၏စာရွက်စာတမ်းများ၏သီးနှံသို့မဟုတ်ဖြောင့်မိတ္တူလိုအပ်ခဲ့လျှင်။
ကလစ်နှိပ်ပါ က validation အိုင်ကွန် (မျက်နှာပြင်ရဲ့ညာဘက်အောက်မှာလိမ္မော်ရောင်ခလုတ်ကို) သင်ချင်တယ်အဖြစ်သင့်စာရွက်စာတမ်း scan ဖတ်ထားပြီးလျှင်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်များအတွက်မျက်နှာပြင် menu ကိုထိပ်၏ icon များကိုသုံးပါ သီးနှံပုံရိပ်, လှည့်, စာသား add စသည်တို့ကို
Office ကိုမှန်ဘီလူးကကမ်းလှမ်းစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ options များ
ကင်မရာအားဖြင့်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့အပြင်, Office ကိုမှန်ဘီလူးကမ်းလှမ်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ features တွေ စစ်ဆင်ရေးများအတွက်သင်စာရွက်စာတမ်းများလုပ်နိုင်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏စာရွက်စာတမ်းများ၏ scan ဖတ်မိတ္တူကိုကယျတငျနိုငျ ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများ။ အဆိုပါလျှောက်လွှာကဲ့သို့သော (ဂန္ရုံးကို formats ရန်သင့်စာရွက်စာတမ်းကိုကယ်တင်နိုင် စကားလုံး ou PowerPoint) သို့မဟုတျပင် PDF ဖိုင်ရယူရန်,
အဆိုပါကျမ်းအလိုအလြောကျကအသိအမှတ်ပြုထားပါသည် OCR Office ကိုမှန်ဘီလူးနှင့်အတူပေါင်းစည်း။ ဒါဟာသင်ခွင့်ပြု ဤစကားသည်ရှာဖွေရေး သို့မဟုတ်သင့် scan ဖတ်စာရွက်စာတမ်းများ, ဒါမှမဟုတ်ကူးယူသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ရန်စာသားထဲမှာစာပိုဒ်တိုများ။
မှတ်တမ်းတင်သည့်အခါ, သင်၌သင်တို့၏စာရွက်စာတမ်းထားနိုင်ပါတယ် ဓာတ်ပုံပြခန်း သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် OneDrive အလွယ်တကူဝေမျှဖို့။
မီနူးတွင် "ကျနော့်ရဲ့ဖိုင်တွေ" လျှောက်လွှာများ, သငျသညျအပေါငျးတို့သ scan ဖတ်စာရွက်စာတမ်းများကိုရှာပါ။ အဘို့အရာက Options (တစ်ဦးချင်းစီဖိုင်ရဲ့အောက်ခြေမှာသုံးစက်) ကိုကလစ်နှိပ်ပါ အပိုဆောင်း features တွေ (Edit ကို, ဝေစု, delete, ... ) ဖိုင်ကို format နဲ့ပေါ် မူတည်. ။
ကိုယ်အလေးချိန်တားစီးကြောင်း6ဟော်မုန်း - ကျန်းမာရေး MAG PLUS
ဤသည်သံပုရာသောက်စရာ, ဇီဝြဖစ် accelerates encrusted အူနှင့်အပူလောင်အဆီ၏နံရံသန့်ရှင်းရေး - နောက်ထပ်ကျန်းမာရေး MAG